Banijya News | » मिर्गौला फेलले भयावह रुप लिदैः आखिर किन हेलचेक्र्याइ गर्छ मान्छे ? मिर्गौला फेलले भयावह रुप लिदैः आखिर किन हेलचेक्र्याइ गर्छ मान्छे ? – Banijya News
मिर्गौला फेलले भयावह रुप लिदैः आखिर किन हेलचेक्र्याइ गर्छ मान्छे ?
१८ माघ, २०७६, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा आफ्नै हेलचेक्र्याइले गर्दा मान्छेमा रोग जन्मने धेरै परिस्थीतीहरु हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गौला रोगीहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्दी भइरहेको छ । मिर्गौला बचाउनुपर्छ भन्ने चेतना हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यप्रति हेलचेक्र्याइ गरेका कारण मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै गएको विशेषज्ञहरुले जनाएका छन् । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका अनुसार नेपालमा १० जनाको मिर्गौला जाँच गर्दा एक जनामा मिर्गौलाको समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा बर्से्िन मिर्गौला दिवस, सचेतना अभियान सञ्चालन गरिए पनि सिमित व्यक्तिमात्र मिर्गौला रोगबारे सचेत रहेको पाइन्छ । हाल नेपालमा तीस लाखभन्दा बढी मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै, तीन लाख व्यक्तिको मिर्गौला बिग्रन थालिसकेको अवस्था र तीस हजार व्यक्तिको मिर्गौला निको पार्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको अनुमान छ । यसमध्ये बर्सेेनि तीन हजार जनाको मिर्गौला बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुग्ने गरेको र नौ सय जनाको अकालमा मृत्यु हुने अनुमान छ । मिर्गौला बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई बचाउन डाइलासिस वा मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ हजार ८ सय जनाले मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्दै आइरहेका छन् । एक जनाको एकपटक डायलाइसिस गर्न सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले मिर्गाैला फेल भएका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि १ लाख रुपैयाँ सहुलियत रकम सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
मिर्गौला हरेक मानिसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने प्रमुख अंग हो । यस्तो महत्वपूर्ण अंग स्वस्थ राख्न हरेक व्यक्ति सचेत हुनैपर्छ । तर बिडम्बना नेपालमा शिक्षित वर्ग पनी सचेत भइनरहेको अवस्था छ ।
मिर्गौला बिग्रनुको प्रमुख कारणमा अस्वस्थ जीवनशैली, रक्तचाप, मधुमेह, जथाभावी रुपमा कडा औषधि सेवन आदी प्रमुख कारण रहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमात्र होइन, सुगम ठाउँमा पनि मिर्गौला परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ मिर्गौलाको स्थिति थाहा पाउन समय–समयमा परीक्षण गराउनैपर्छ ।
उमेर बढेसँगै, मिर्गौलामा पनी समस्या आउने बढी खतरा हुनाले सधैँ मधुमेह नियन्त्रणमा राख्ने, उच्च रक्तचाप भएकाहरुले नियमित जाँच गराउने, स्वस्थ र सन्तुलित खाना खाने, व्यायाम तथा हिँडडुल गर्ने, तौल बढ्न नदिने, प्रशस्त पानी पिउने, धूम्रपान र सुर्ती सेवन नगर्ने, जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गरेर मिर्गौलाको ख्याल राख्न सकिन्छ ।
मिर्गौलामा समस्या आइहालेमा निम्न लक्षणहरु देखा पर्छन् ।
पिसाब धमिलो आउने
धेरैपटक वा कम पिसाब लाग्ने
छातीको पछाडिपट्टिको भाग सुन्निने
भोक नलाग्ने वा भोक बढी लाग्ने
कुनै रोग लाग्यो भने लामो समयसम्म निको नहुने